स्वर र सुन्दरता दुवैको धनी इन्दिरा जोशी, हेरौं फ्यानले रुचाएका तस्विर – ramechhapkhabar.com
स्वर र सुन्दरता दुवैको धनी इन्दिरा जोशी, हेरौं फ्यानले रुचाएका तस्विर
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा निकै जमेकी चर्चित गायिका हुन् इन्दीरा जोशी । गायनमा चर्चामा आइरहने इन्दीरा जोशीको स्वर निकै सुमधुर र निखारिएको छ ।
विजय भुसालद्वारा लिखित गीत रातो घाँघरबाट उनले प्रसिद्धि पाएकी हुन्।
जति उनको स्वरको चर्चा हुन्छ त्यति नै उनको सौन्दर्यको पनि चर्चा हुने गर्छ । नेपाल आइडलको जज बनेदेखि पछिल्लो समय उनका फ्यानहरू निकै बढेका छन् । जब उनी स्टेजमा चढेर आफ्नो गीतमा घुल्न थाल्छिन् तब दर्शकको ध्यान उनी तर्फ हुन्छ ।
उनका अहिले सम्मका धेरै गीतहरू हिट भएकाले नै होला उनका फ्यानहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । जति उनको स्वर सुमधुर र निखारिएको छ त्यति नै उनी सुन्दर छिन् । इन्दिरा जोशीले डोरेमी सङ्गीत एकेडेमीबाट सङ्गीत सिकेकी हुन् । उनलाई उनको सङ्गीत व्यवसायमा स्थापित गर्नमा नेपाली तारा कार्यक्रमको भूमिका रहेको छ।
उनी नेपाली तारा कार्यक्रममा पाँचौँ स्थानसम्म पुगेकी थिइन्। सन् २०१७ को नेपाल आइडलकी निर्णायकको रूपमा पनि उनी परिचित छिन्।
इन्दिरा जोशी को जन्म बि. सं. २०४३ (जुलाई १८, १९८६) मा उनका बुवा-आमाको सात ओटा सन्तानहरू मध्ये उनी पाँचौँ सन्तानको रूपमा नवलपरासीमा भएको थियो। उनका बुवाको नाम जनहवि प्रसाद जोशी र आमाको नाम अलाकन्द जोशी हो। नेपाली साकिरा भनेर पनि चिनिने उनले बेलाबेलामा आफ्ना सुन्दर तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहने गर्छिन् ।
‘रातो घाँघर’ तथा ‘उध्रेको चोली’ बोलको हट गीत गाएर निक्कै चर्चामा रहेकी हट गायिका इन्दिरा जोशी जीवनसाथीको खोजीमा रहेकी छन् । उनलाई बुझ्ने र माया गर्ने केटाको खोजीमा रहेको उनले खुलासा गरेकी छन् ।
उमेरको हकमा ३० वर्ष कट्न लागेपछि पारिवारिक प्रेसरले गर्दा बिहे गर्ने मुडमा उनी रहेको बुझिएको छ । केटाको कमाइ र भनाइ खान नपरोस् भन्ने उनलाई नेपाली सकिरा भन्ने गरिएको छ । आफ्नो यो चाहनालाई उजागर पार्ने किसिमको एक गीतलाई हालै उनले तयार पारेर विभिन्न रेडियो तथा एफएमबाट प्रसारणमा ल्याइसकेकी छन् ।
नेपाली गीत–संगीतमा इन्दिरा जोशीलाई बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल गायिकाको रूपमा लिइने गरेको छ । कतिपय चलचित्रमा अभिनयको लागि अफर गर्दा पनि उनले अभिनय भनेको गरेको पाइएको छैन ।
समय आएपछि र आफूलाई चित्तबुझ्ने कथावस्तु भएमा निकट भविष्यमा चलचित्रमा अभिनय गर्ने सोच अवश्य रहेको खुलासा पनि उनले गरेकी छन् ।